Kuyini club ebusuku, namuhla makwaziwe yibo bonke: izingane, abafundi kanye lesizukulwane esidala. Nokho, eziningi zalezi izikhungo ezisaqhubeka kubangele umuzwa ingozi futhi kubonakala ukubeka emihlanganweni izaphula-mthetho. Namuhla, thina simazi kangcono izwe nightlife gay, funda kabanzi mayelana bar "Crazy Daisy" (eMoscow) futhi aqonde lokho kwashintsha ngokuhamba kweminyaka.
Yini namuhla ukusabalala omkhulu emhlabeni wonke futhi akukho cishe lonke movement zamasiko ngaphambi uhlelo emincane futhi kulinganiselwe. Ukuvela izikhungo ezifana zaba phakathi "umthetho ezomile" e-United States of America. Iqiniso ukuthi imizamo sokuqala kwaqala ukuba zivimbele ekuthengisweni kotshwala kuleli zwe ekhulwini le-18. Ukuphuza ngokweqile ukufinyelela mass enkulu yomphakathi, ngenxa ukusetshenziswa okungajwayelekile utshwala abantu balahlekelwa amakhanda abo. Isibalo ukubulala, ukuphanga.
Ngisho amasosha abavamile abavamile nsuku zonke kudliwe izindebe eziningana kagologo. Lokhu isiphuzo esikhundleni sazo, futhi ikhofi ekuseni futhi itiye eyodla.
Ukulwisana ukuluthwa utshwala kwaqhubeka iminyaka eminingi. Ngasekuqaleni kwekhulu le-19, engaphezu kwemibili kweshumi uthi sethule "mthetho". Ngokwemvelo, lokhu kusho izakhamuzi okhaliphile namasu kungukuthi ejwayele give up kanjalo nje. Akubuyisiwe emkhubeni kwakungenakwenzeka ukuba kuqedwe ukusetshenziswa kotshwala, ngokumane ukuchibiyela umthethosisekelo. Kwahlelwa uSomandla ngasese Amabha lapho izivakashi abavamile laba labammele emhlabeni lobugebengu.
Kuleli zwe lanamuhla, futhi ungathola lezi izindawo ezishisayo, isibonelo, "Crazy Daisy" (eMoscow). Kulokhu, umkhathi friendly ngempela futhi enokuthula.
Kuze kube manje, lo mqondo utshwala yokuthengisa kuma-nightclub lamahubo lilingana, kodwa eziphuthumayo kanye emkhathini jikelele baba ehluke ngokuphelele.
Amaziko lokuqala azenza ezisinika okuthile ukukhumbuza amakilabhu yesimanje kanye nemigoqo, uvele kuphela lapho "umthetho ezomile" uyekwa ngokuphelele. Manje-ke sasingekho isidingo ukufihla futhi ukugwema ubulungiswa. Kuma-nightclub babé ngokuphelele zomthetho. EMelika, kwakukhona izindawo lapho ungase ube isiphuzo esimweni esikhululekile futhi kumbuthano ajwayelekile. Clubs abe ukuhlukana ecacile zobuhlanga: I-Afrika baseMelika noma abamhlophe kuphela kuphela.
Ngezansi siyathola lapho "Crazy Daisy" (club) nokuthi ihluke kanjani umncintiswano.
Engxenyeni kwekhulu le-19 yesibili, ukunyakaza okunjalo kwenza ikhiqizwa eYurophu. Wayephila ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili sekusile kuyo futhi abuyisele ama-emnothweni wezwe sebeqala ukugxila ekuthuthukiseni isiko. Manje ukwamukela imibono yabanye mayelana izinguquko kuma-nightclub. Uhlu izivakashi kwezikhungo zibala izakhamuzi ehloniphekile, abantu abavelele emphakathini.
Isenzakalo esiyingqopha-mlando entsha ekuthuthukiseni le mboni weza yoma. Lesi isikhathi of disco. imininingwane Bright elaphuma sikhathi - ibhola elikhulu lembhali, exhunywe ophahleni. Ngaleso sikhathi, i-club umema abadumile nabaculi owenza esiteji ihlombe we yokuphumula izilaleli.
Ngokuthakazelisayo, isikhungo sokuqala nge isikhala nokudansa iqoqo elincane imiphumela ukukhanya kwaba khona eFrance ngo-1953. Kodwa namuhla aqhoshe ezinjalo kanye club "Crazy Daisy" (eMoscow).
Eighties yayiyiminyaka elikhulu usadlondlobele wangempela nightclub emhlabeni wonke. Ngokwemvelo, iSoviet Union wema eceleni. Lokhu ukuhamba yaqala ukusakaza kusukela entshonalanga futhi kancane kancane yanqoba edlulela emasimini amasha.
Ukuba isiko kakade athuthukile (eYurophu nase Melika), amakilabhu babe yindawo sokudansa. ESoviet Union imisebenzi yokuqala bebelokhu kancane isifiso sokufuna ukuvelela. Endaweni yokuqala kwaba ithuba simazi kangcono imisebenzi abaculi abasha ababekhuluma mathupha. Isikhathi esiningi laba babengamadodana izitayela umculo, efana jazz rock. Singasho ukuthi uma club ebusuku ensimini ka ezweni lethu laliyigumbi elincane, lapho emnyango kwaba kutholakala kuphela kumbuthano ewumngcingo zabantu.
Ukudansa isiqondiso kwakungathandeki, kwakucatshangwa ukuthi le impela umsebenzi othize, okudinga amakhono athile. Uma uzibheka unkulunkulu wangempela umdanso, wena ukuqondisa eya "Crazy Daisy" Ibha (eMoscow), lapho amakhono akho nanela.
Ukuwa kweSoviet Union kwamfaka izinguquko yonke imikhakha yempilo kubonakala isiko yokuzilibazisa. Manje nightclub babe yindawo ukudansa, ukulalela izingoma abaculi athandwayo zomhlaba. Ngisho nangaleso sikhathi, lezi zinhlangano ziye kwadala impikiswano. Omunye waphikisana ngokucijile ngokumelene imisebenzi efana ezokungcebeleka, kuyilapho abanye ukusekela nokuthuthukisa ke.
Phakathi nale nkathi Melika naseYurophu nightlife ukuthi ezifuywa ezingeni elisha lonke. Manje wonke amakilabhu eziphambili esetshenziswa ukuthuthukiswa yakamuva ukwakha ukukhanya kanye nemisindo.
Kule minyaka edlule, lezi zinto ziba khona izakhamuzi Russian. Modern mncintiswano amabutho ukuthuthukisa njalo, ekhuphuka nge izitayela ezintsha izinhlobo ikhasimende somshado. Ukuze uqinisekise lesi, ungavele ufunde kabanzi mayelana club ebusuku "Crazy Daisy" (eMoscow). Izithombe ezisuka izohamba Akungabazeki.
Kuze kube manje, umuntu omdala ezokungcebeleka enjalo etholakele injongo yaso nemboni yezikaqedisizungu. Emhlabeni wonke izinkulungwane ebusuku evulekile kuma-nightclub, ezinye zazo kufanele kubhekwe okungcono.
abameleli abaningi international zalezi zinhlangano ziye wagibela ngalé Imibono evamile. Ngokwesibonelo, Greenvalley nightclub, etholakala e-Brazil - insimu enkulu, okusetshenziswa hhayi kuphela imigoqo kanye dance floor, lapho ungakwazi ukujabulela uhlobo enhle nasemachibini amaningi. Linikeza - yokudlela kanokusho, ethokomele lounge endaweni.
Isetshenziselwa amaqembu, kunoma iyiphi indawo esekusithekeni nge endaweni enkulu. Ngakho, e-London club Indwangu latholakala i ishede esishiywe dengwane. Isici eyingqayizivele kule ndawo - a isixwayisi umdanso phansi. yokugqoka okuqinile lapha akusilo isimo kudingekile kuphela - iningi futhi ukutholakala kwemibhalo.
Akuwona wonke umuntu ithuba lokuvakashela leso sikhala lezinkanyezi, kodwa ungathola nozakwabo kakhulu ekhaya. Ukuqinisekiswa lokhu - club "Crazy Daisy" (eMoscow). Izithombe ubeka egqamile futhi bayaxoxa, kodwa ngeke ukwazi ukudlulisela emkhathini Amazing lapho akunakwenzeka ukuthandana.
Uma ngaphambi nightclub siyindawo lapho nje wajabulela umculo, ephuza whiskey, namuhla Kuqala lasuka nokudansa. Abahleli of the best amaqembu ayakwazi ukunikeza isiyalezo imizwa ongenakulibaleka.
Akunakwenzeka ukuhlola nightclub, bengazi ukuthi hlobo luni lomculo ke uyabulawa. Adume kakhulu namuhla:
Ikakhulukazi party ethandwa, okuyinto abamenyiwe DJs owaziwa. By endleleni, ngaphandle laba bantu Awukwazi ukwenza noma yikuphi obubodwa ekilabhini. Kukithi kubo, ezimweni eziningi kuncike isimo eziyoba.
DJ ingasebenza nge isiqondiso ewumngcingo zomculo, noma, njengoba e "Crazy Daisy" (eMoscow) eyolanda ezihlukahlukene izitayela ukuba isivakashi ngasinye wathola isabelo sakhe we omuhle.
Ngaphezu kwalokho, wonke ukusebenza ahambisana Amazing show ukukhanya, okusenza umbala nokuphila kunoma iyiphi inkampani.
Edlidlizelayo ebusuku eMoscow
Njenganoma iyiphi isimo dolobha enkulu, edolobheni elidumile Impucuko yayo, kokubili ngesikhathi sasemini futhi emva kwelanga.
Ngemva kokuphothula umsebenzi emahhovisi, kokushiya amanyuvesi, intsha kanye nabantu abadala baye endaweni lapho ungakwazi ukukhohlwa ngobunzima ukuze ujabulele umculo uphumule nabangani.
Ngoba umuntu onjalo endaweni iba cafe ethokomele noma sokudlela, kuba omunye uya inkampani esinomsindo uya club ebusuku.
A ezihlukahlukene enkulu ezindaweni ezifana ukunika ukukhetha. Okokuqala, wonke umuntu uzama ukugqama esixukwini, khetha isiqondiso zomculo ethize kanye nemibukiso esiqhuba. Okwesibili ukuheha amakhasimende ukukhushulwa ahlukahlukene kanye izaphulelo.
Ungakhetha indawo lapho uzobe ukhululekile futhi kumnandi. Uma fan of ezihlukahlukene cocktail nomkhathi onohlonze nje ukuthola lapho club ebusuku "Crazy Daisy" uhambe beyofuna adventure.
Uzowathola umangale kangakanani ahlukahlukene futhi eyingqayizivele kungaba dolobha.
Indawo impumelelo crazy
Ngisho noma ungeyena umhlali Russia, kodwa uhlela ukuvakashela izwe, qiniseka ugcwalise esimisweni endaweni yakho ezuzisayo. Ngokumangalisayo egqamile futhi ukhumbuleka ngempela ukuhlala kwakho kuyoba ku "Crazy Daisy" (eMoscow).
Into kuphela okudingeka uyenze - iwukuba bayakhohlwa izakhiwo, ngaphandle kokwesaba futhi balungele ezintsha. Lokhu club ebusuku akuyona nje igama layo. Omunye chips bebelokhu futhi sihlale ukudansa crazy kubha.
Ukuze akhulule izivakashi, konke lapha. Ngokuyinhloko asebenzayo, intombazane nobudlelwano ukusebenza endaweni yokucima ukoma. Ayikho jackets kanye ibhulukwe, kuphela izikhindi ihembe nge neckline ezingena - ukuthi umsebenzi wabo iyunifomu. Bahlale bekulungele Zimisele ukuhlanganyela imizwa yabo futhi ukuze ubonise indlela okhela kahle emaphathini.
Izithombe kulesi sikhungo awela kaningi emakhasini omagazini fashion kanye zincwadi kuyi-Internet. Esinye isici club angabhekwa omningi izinhlobo zophuzo oludakayo. Lapha ungathola cocktail yonke ukunambitheka: isibhamu (iziphuzo, chugging) futhi Long (inhlanganisela izinhlobo eziningana utshwala ezingaba kancane ukuphuza kusukela tube).
Okulandelayo sizobe ufunde imininingwane ebanzi mayelana "Crazy Daisy": Ikheli e Moscow, izingcingo bese wabelane izindawo ezingcono kunezinye.
Lena ukuphela kwendawo lapho ungakwazi bayakhohlwa isidina izinkinga zempilo kwansuku, ukucwilisa emkhathini wenjabulo engalawulwa unethemba.
Amaphromoshini, imibukiso ku- "Crazy Daisy"
Ukuze uthole enye amaqembu best enhloko-dolobha Russian kungaba ulula. Lokhu kudinga ukuba uphendulele kakade nesishiyagalombili. Kodwa ngalezo zinsuku, efana ngoLwesihlanu nangoMgqibelo, lapho izindawo ezifana zihamba phambili, futhi labo abasifunayo uphumule ngokwanele ukuba babe ephansi kakhulu yobudala embundwini for ebusuku club "Crazy Daisy" (eMoscow) esiqokiwe ezingeni hhayi ngaphansi kuka amabili nanye iminyaka.
Uma ngaba mdala, uzibheka lucky kakhulu. Omunye ebanda kunazo zonke club - kungcono "ngokumiswa Crazy". Njalo ngeSonto, ungakhetha yimuphi iziphuzo kanye cocktail e esingenamkhawulo ruble nje angamakhulu ayisithupha (cishe u- $ 9). NgoMsombuluko, nje ngaphezu kwesigamu inani ngenhla lizwakalise isivakashi ngasinye Ungathenga amaningi njengoba eziyisithupha iziphuzo kagavini plus Cola.
izinhlelo Unforgettable aphethwe lapha uzibona cishe nsuku zonke, noma kunalokho ebusuku. Kodwa uma wena wakwazi ukuba bangene club ngesikhathi nanoma iliphi iholide, uzothola umthamo double injabulo.
Ngaphezu kwalokho, lapha ngeke ucime ukulamba kwakho enye - ngokomzwelo.
Uma wavakashela club "Crazy Daisy" eMoscow (ikheli lapho uyofunda okuningi), ufuna ukubuyela lapha kaningi.
Lapho sihlela bazijabulise ukhululeke, bese kuqala kunazo zonke sithembela kokuhlangenwe nakho kwawo siqu, kanti eyesibili - ngibize umbono abangane. Uma uya okokuqala ezifana isikhungo ngokuthi "Crazy Daisy" (eMoscow), umsebenzisi uzokwazi ukukunikeza ukwaziswa okuningiliziwe kakhulu futhi kunembile. Njengoba wazi, ngeke ephelele kuwo wonke umuntu. Wonke umuntu imibono yabo siqu, izintandokazi imininingwane ezibangela unemizwa engemnandi. Yiqiniso, kungase kwenzeke ukuthi kufanele ulinde isikhonzi noma umculo ngeke like it, kodwa konke lokhu kwenzelwe nje iyodwa.
Iningi izivakashi the club uyajabula ukuze ukuncoma kule ndawo kunoma ubani ofuna okuvelayo egqamile futhi ukulungele ukuba follies kancane.
Ukuze ugweme izimo ezingemnandi, kungcono ukubhuka amathebula e ebusuku isikhungo ngaphambili. Okudume kakhulu has intengo yayo, ngamaholide ukuze uthole endaweni ngaphandle ukubhuka kungaba yinkinga kakhulu.
Umculo ndlela ehlukile.
Ukukhetha elikhulu iziphuzo kanye Ungadla.
Amakheli kanye oxhumana ezikoleni e Moscow
Uma ungazi lapho "Crazy Daisy" e Moscow, lolu lwazi ngeke ngenhlanhla. Into esemqoka odinga ukukwazi: isigaxa enhloko-dolobha alikho kwelinye samuntu. manje Ngenxa ukuthandwa nothando izivakashi ungakhetha ukunambitheka izikhungo ezintathu.
Ibha wokuqala sise Bolshaya Dmitrovka, njll 23/1 .. Ukuze sicacise imininingwane oda noma enze ithebula, ungaxhumana nomphathi kumaselula efana: +7 (495) 139-25-48; +7 (495) 139-25-49.
Into elandelayo, okuyinto ivula iminyango yayo club kancane lukhuni futhi Flamboyant - kuyinto Sretenka, 21/28 etc ... oxhumana naye efonini yabo: +7 (495) 632-99-52.
Enye "Crazy Daisy" ikheli eMoscow simi ngale ndlela :. Turgenev Square, 2. washayela umphathi kungaba inombolo elandelayo: +7 (495) 641-34-44.
Uma ungaphandle kwe we Russian Federation, ungahlala thintana ne abameleli club nge e-mail: crazydaisymoscow@gmail.com. Ngeke ukuphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze yonke imibuzo yakho.
Manje uyazi ukuthi club yangempela futhi yini okufanele uyilindele kulokho quthu wachitha endaweni lapho kukhona njalo iholidi. Njengoba kwase kukhona kanye, ngeke ufune ukubuyela uma inkampani enkulu futhi ujabulele izwe ebusuku kumnandi futhi aziphumulele.
"Miss kagogo Brazil" - umncintiswano oshukumisa eziningi
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ukuzilibazisa "Oriole" (Ulyanovsk): izithombe kanye nokubuyekeza